Indlela yokomeleza isifuba, ukupompoza umshicileli uze ungalonakalisi impilo yakho? Imisipha yomzimba wethu idibene kunye nezinye izitho zangaphakathi. Yaye le nxu lumano kufuneka ithathelwe ingqalelo ngexesha loqeqesho, ingakumbi ukuba "ungaphantsi kwama-30". Ukwazi ukuqala ngokufanelekileyo ukudlala imidlalo, uza kufumana inani lamaphupha akho ngaphandle komonakalo emzimbeni.
Xa sihamba sitrato, hamba kwi-elevator okanye uhlale ngeTV, iinyawo zethu "zihamba ngokwazo". Ngaphantsi kwesenzo seengcamango, izihlunu ziphakamisa imilenze, zijika intloko, zikhokelela isandla sethu ukutshitshisa. Konke oku kwenzeka kwinqanaba elincinci, oko kukuthi, kwiinombolo zeengcambu zengqondo, ezibona ulwazi kwaye zithumele kwiimisipha. Kwaye uluhlu lwale mpendulo ye-muscle lukhulu kakhulu kunokuba sicinga.
Ngokomzekelo, i-musculature iyaphendula ngokucacileyo kwinto eyenzeka kwisisu. Ukuba ulamba, izihlunu ezithile zinyanzeliswa ukuza kukusondeza. Ukuba uzele, awukwazi ukuhamba ngesandla sakho okanye unyawo lwakho. Nangona kunjalo, ukuba kukho iimeko ezingaqhelekanga ekusebenziseni isisu, oku kunokuchaphazela iimpawu ezisetyenziswe kwiimisipha. Ukukhokelwa yizo zibonakaliso eziphosakeleyo, iingqondo zenza izigqibo eziphosakeleyo. Ngenxa yoko, izihlunu zidibanisa kunye nesisu, zilahlekelwe ngumxhelo wabo - umthwalo kubo uyancipha. Kwaye oku kuthetha ukuba izihlunu ezibekwe kwicala ngecala lifumana umthwalo ophindwe kabini. Akunakucelwa ukuba kungekudala okanye kamva, ngenxa yokugqithisa ngokweqile, ezi zihlunu ziyaqala ukuhlamba. Kwaye ke umntu lowo isisu esimele siphathwe sifike kugqirha ngokukrokrelwa kwe-myositis, neuralgia okanye i-osteochondrosis. Okokuthi, enyanisweni, uya kuchitha "umsi", endaweni yokucima "umlilo".
Nangona kunjalo, izihlunu "eziphendula" ngenxa yokuba zingekho ziphilo ezinempilo, aziyi kubanika i-syndrome. Njengomthetho, abantu abangenanto yokulimaza bafika kumaziko empilo, kwaye ngoko bayaqiniseka ukuba impilo yabo ingasongelwa nantoni na. Ngenxa yoko, ukuzivocavoca kukhethwe ngokubhekiselele kumgaqo "ukukhula ngokukhawuleza" okanye "ukwenza umfana osemtsha kunye ne-elastic". Yintoni eyenzeka ngaphakathi emzimbeni ngeli xesha, kungekuphela nje iingxaki nje kubadlali, kodwa nabaqeqeshi babo. Ubuninzi abayilandelayo bubonakaliso beklasi yempendulo kumthwalo - umtshini owaziwayo. Nangona kunjalo, isantya senhliziyo sisabela ngqo ngqo kwingcinezelo. Utshintsho olunzulu olunokuthi lwenzeke emzimbeni ngenxa yokuqeqesha okungenangqiqo, kungakhange kuthathelwe ingqalelo. Ngoko safundiswa: ukuba imfundo yomzimba okanye enye into eyenziwa ngumzimba - ithetha ukuba, kubalulekile. Hayi, le ngqungquthela, imveliso yenkulungwane ekhohlakeleyo ye-hypodynamia. Abadlali bezemidlalo, ebomini apho kukho ukunyakaza okuninzi okwanelishumi, ngokuqhelekileyo abantu abagulayo kakhulu. Umzimba wabo ngenxa ye-muscle overloads ngokukhawuleza ijika ibe yi-rubble. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukwenza imidlalo ngokufanelekileyo.
Ezinye iingcali kwi-kinesiology (i-kinesiology - indlela yokuxilongwa kunye nenkango esekelwe ngokuhambelana ngqo phakathi kwimeko yemisipha kunye nomsebenzi wezinye iinkqubo zomzimba) bakholelwa ukuba amaklabhu ezemidlalo - ngendlela ekhoyo ngayo namhlanje - inobungozi kwaye inobungozi kwimpilo. Mhlawumbi, iingxelo ezinjalo zikwahlukileyo, kodwa, ngelanga, azinalo. Ukubumba, ukuba iguqule igama elivela kwisiNgesi, lithetha "ukunika iintlobo." Oko kukuthi, umsebenzi wayo oyintloko kukuba unike umfanekiso ofunwayo. Iqhinga elingcolileyo sele selikwisihloko: ukubunjwa kwemisebenzi kuphela kwifom, kwenzeka ntoni "ukugxotha", njengomthetho, ayiqwalasele. Kuyafana nokwakha umzimba. Emva kwakho konke, ukwakha umzimba - "ukwakha umzimba" - kwakhona lixesha kunye nencazelo ecacileyo. Into ephambili kuyo yimalini yesisipha. Yikuphi kwezi zigqibo? Ukufezekisa "ifom", kufuneka sicinge "ngomxholo" ngokwethu.
Yilokho i-kinesiology icebisa indlela yokuqalisa imidlalo:
- Impumpi, i-pulum volumetric ayimfuneko ukuba ibe namandla kwaye ibe namandla;
- ngokuqeqesha "iingxaki", ubiza umnxeba, ngenxa yokuba abanye abantu basebenza esikhundleni sabo;
- ukuba unengxaki emathunjini, awuyi "khuphela" isisu esisisigxina, ungasomeleza umshicileli, nangona uza kwenza ukuqeqeshwa okufunekayo: ngexesha lokusebenza kwabo, uya kuphelisa kuphela iimisipha zangemva;
- akunakuncedo ukuzama ukufezekisa ibhokhwe ephakamileyo ye-"bhinta" ngoncedo loqeqesho, ukuba isibindi sakho okanye isisu asisebenzi kakuhle: endaweni yezihlunu zesifuba sakho, uya kutywala intamo yakho kunye namagxa;
- ukuba uqaphela ukuphulwa kwesondlo sakho (ukwanda okanye ukuncipha), oku kuthetha ukuba kufuneka uqale ukulungisa iingxaki zesisu, kwaye uqale ukuqala ukwakha umzimba: kule meko, awuyi kukwazi ukupompa amaqela omzimba;
- Ukuba unqumla imisipha yentamo kunye nommandla wekollar, ungabonakala udibanisa, intloko iya kuhamba phambili ngokungenazo;
- Abasetyhini emva kweminyaka engama-40 bayingozi ukuba "baphakamise" isifuba: kunokubakho iigununu kunye nokukhupha;
- kunye neengxaki zengqondo, akudingekile ukuba unike umthwalo kwi-shin: kukho ingozi ekhethekileyo yokuchithwa kunye nokuxhaswa kwe-joint;
- qaphela umthwalo kwibhande lephepha: oku kunokuphazamisa i-pancreas. Inxalenye efanelekileyo yalo - "intloko" -isetekisi ye-pancreatin ijusi, ephula amaprotheni kwi-amino acids. Yaye ukuba iiprotheni ayigcinwanga, akusayi kuba namandla kumisipha. Inxalenye engasekhohlo - "umsila" - ukubeka i-insulin, kwaye ukuba upompa umsila obanzi kunazo zonke, ungakwazi ukuphambanisa isifo sikashukela;
- ukuba unesitenxo kwimisebenzi yesibindi okanye iintso, kuyingozi ukunika uxinzelelo kumxolo ohlangeneyo: oku kubangele ukulimala rhoqo.
Iingcali ze-Kinesiologists zicebisa ngaphambi kokuba uqale umsebenzi kwisisundu ngasinye ukuvavanya ukuxhamla kwiinkalo ezifanelekileyo kunye nezitho ezifanelekileyo. Ingaba konke kuhambisane ne-muscle, ingcali inokumisela ngoncedo lwesifundo esincinci. Uya kukunyanzela kwiindawo ezithile ukuze uhlambe iintlobo ezahlukahlukeneyo, uhlolisise izitho zakho zangaphakathi, kwaye ngoko ufumanise ukuba ngaba baphendule ngokwaneleyo ukuxhatshazwa kwemisipha. Ukuba kuvela ukuba ezinye izixhumo ze-reflex ziphukile, izihlunu kunye nezitho zabo zoodade kufuneka zihlolwe, okanye ziyakuthemba ukuxilongwa kwe-kinesiologist kwaye zizame unyango olunikezelwa zona. Ngaphandle koko, uqeqesho oluqhubekayo lunokunyusa imeko.
Ngovavanyo oluninzi, iingcali ziye zabonisa ukudibanisa ngqo phakathi kwemizimba kunye nomoya womntu. Sekude kulwaziwa ukuba zonke iingxaki umntu ahlangabezana nazo, njengokuba kunjalo, "ukukhahlela" ngaphandle ngeembonakaliso ezahlukeneyo zomzimba - nokuba yintsimbi okanye isilonda sesisu. Ngakolunye uhlangothi, iingcali ze-Kinesiologists, zijongene noxinzelelo kunye neengxaki zengqondo "eziboshwe" kwiimisipha. Kwaye oku kuthetha ukuba ekulawuleni kwabo kuwela ukulahleka kobunzima, kunye nokunye ukulungiswa komfanekiso. Ngokubhekiselele kwisimo seengxube, bathetha ukucacisa ukuba yisiphi isizathu sokuziphatha okubangela ukuba umntu adle okanye adle ngokungafanelekanga. Ngosizo lweendlela zabo, bafana nokuba babuze umzimba onjani umzabalazo kunye nobunzima obuninzi kufuneka uthathwe kwaye yiyiphi indawo ekufuneka ifumane ukuqeqeshwa kwindawo yokuzivocavoca. Ngoko ke, ngokuchanekileyo uqala ukudlala imidlalo, uya kuzigcina kwiingxaki ezinzulu kwixesha elizayo.
Ngendlela, ubudlelwane phakathi kwemisipha kunye nezitho zaqulunqwa (kunokuthiwa, uzive ngezandla zakhe) ochwephesha wezonyango zezemidlalo esuka eDetroit, ugqirha oyintloko weqela le-Olympic yase-US yama-60s, uJ. Gudhard. Elizweni lethu, i-kinesiology isetyenziswe njengomgca wokulinga wezokwelapha owavela kutshanje, kwaye yaziswe ezweni lakwabo ngokusebenzisa izixhobo zengcali. Njengomthetho, ukubonisa le mfundiso, umfundi ongazifundile ucelwa ukuba angamdibanisi ne-kinesiotherapy: nangona ingcambu egameni liqhelekile (i-kinesio "intshukumo"), imigaqo iyahluke ngokupheleleyo: i-kinesiotherapy, ngandlela-thile, uhlobo lwezemfundo zonyango.
Ukulahlekelwa isisindo ngokutya okufanelekileyo
Ukutya iMaggi - indlela elula yokulahla ubunzima obuninzi
Ukutya kweCalifornia: iingcebiso kunye namanqaku
Kuphi ukufumana indoda kumfazi emva kweminyaka engama-40 ubudala
Izifo zabantu ezifa, ukukhusela kwabo
Izithethe zentsapho ezilungileyo